नेपाल सेवा लघुवित्तको नाफा २६ लाख ८ हजार मात्र
साउन २९, काठमाडौं (अस) । नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको गत आव २०७५/०७६ को चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको छ । वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको खुद नाफा अघिल्लो आव २०७४/०७५ को असार मसान्तको तुलनामा गत आवको सोही अवधिमा ३५ दशमलव ८७ प्रतिशत घटेको छ ।
कम्पनीले गत आवको चौथो त्रैमाससम्ममा रू. २६ लाख ७ हजार खुद नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासको तुलनामा गत आवको सोही अवधिमा १ दशमलव ५७ प्रतिशत कम खराब कर्जा संकलन गरेको छ । कम्पनीले गत आवको समीक्षा अवधिसम्म रू. १ करोड ६५ लाख ८३ हजार खराब कर्जा संकलन गरेको छ । सञ्चालन मुनाफा शीर्षकमा गत आवको चौथो त्रैमासमा कम्पनी रू. १ करोड २१ लख ५९ हजार नोक्सानमा रहेपछि कम्पनीको खुद नाफा पनि घटेको हो ।
कम्पनीले गत आवको समीक्षा अवधिसम्म रू. २ करोड ४० लाख ५८ हजार खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनमा १७ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत बढी हो । गत आवको समीक्षा अवधिसम्म रू. ६ लाख चुक्तापूँजी रहेको कम्पनीले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवको सोही अवधिमा ४३ दशमलव ८५ प्रतिशत बढी रकम जगेडाकोषमा जम्मा गरेको छ । गत आवको समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीको जगेडा कोषमा रू. १६ लाख ४१ हजार जम्मा भएको छ ।
समीक्षा अवधिसम्म रू. ७ करोड ३१ लाख ६८ हजार निक्षेप संकलन गरेर कम्पनीले रू. ४० करोड ४० लाख १९ हजार कर्जा प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासको तुलनामा गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीको निक्षेपमा ५४ दशमलव ८७ प्रतिशत र कर्जा प्रवाहमा ३१ दशमलव प्रतिशत बढी हो ।
कम्पनीको निष्क्रिय कर्जा भने अघिल्लो आवको तुलनामा ८ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत घटेर २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । प्रति शेयर आम्दानी रू. ४ दशमलव ३५ रहेको कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात ८७ दशमलव ८२, प्रति शेयर नेटवर्थ रू. १०७ दशमलव ७३ र तरलता अनुपात १५ दशमलव २७ प्रतिशत रहेको छ ।
वन्यजन्तुका लागि १५ जैविकमार्ग निर्माण गरिदैँ
तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह : व्यवस्थापन जिम्मा पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीलाई
वैदेशिक रोजगार : अब इमेलमार्फत नै श्रम स्वीकृति
पर्यटनमा ‘स्याटलाइट अकाउन्टिङ सिस्टम’